Akụkọ - Silicon carbide seramiiki mgbapụta
High mbuli mgbapụta
Ike mgbapụta abrasion
Energy ịzọpụta slurry mgbapụta
SiC Slurry mgbapụta mgbapụta
Silicon carbide seramiiki mgbapụta
N'ihi oke ike ya, nguzogide corrosion dị elu na ike dị elu dị elu, ejiri silicon carbide ceramik n'ọtụtụ ebe. E nwere tumadi akụkụ ndị a: silicon carbide ceramik nwere ezigbo kemịkal kemịkal, ike dị elu, ịdị ike dị elu, nguzogide abrasion dị mma, obere nsogbu esemokwu, yana nguzogide okpomọkụ dị elu, yabụ ọ bụ ezigbo ihe eji emepụta mgbanaka akara. Mgbe ejikọtara ya na ihe eserese, esemokwu nke esemokwu ya pere mpe karịa nke alumina ceramik na alloys siri ike, yabụ enwere ike iji ya na ụkpụrụ PV dị elu, ọkachasị na ọnọdụ ọrụ nke ibuga acid siri ike na alkalis.
Silicon carbide seramiiki mgbapụta ọ nwere nnukwu ekweghị ekwe, elu ike, elu okpomọkụ na corrosion eguzogide, na ndị ọzọ e ji mara, tụnyere ọrụ ndụ nke nkịtị metal mgbapụta, n'otu ebe gburugburu ebe obibi bụ ọtụtụ ugboro ya ọrụ oge ma ọ bụ karịa.
Scientific na nkà na ụzụ ọhụrụ bụ isi competitiveness nke sịlịkọn carbide seramiiki mgbapụta ụlọ ọrụ. Na nlaazu nke akụ na ụba China na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụpụta ihe nwere ike inwe olile anya maka mgbake akụ na ụba na mgbakwunye na ịchịkwa ọnụahịa mmepụta. Ndị ọkachamara kwenyere na n'ọnọdụ ọnọdụ akụ na ụba jọgburu onwe ya, ndị nrụpụta dị mkpa kwesịrị ịbawanye ike nke ihe omimi sayensị na teknụzụ, ebe ọ bụ na ịdị mma, ọnụ ahịa na nyocha na mmepe, yana akụkụ ndị ọzọ nke mbọ iji mebie ahịa ahụ.
Post oge: Sep-02-2020